Kemgbe ọ malitere na 1987, YUFA Group wuru nnukwu ụlọ ọrụ mmepụta ihe yana ngụkọta nke ihe karịrị 193,000 square mita, yana mmepụta kwa afọ nke ruru tọn 25,000. Gbaso mmụọ nke nka n'ihi na ihe karịrị afọ 30, anyị na-kwara na nnyocha na mmepe nke elu-edu alumina usoro ngwaahịa. Ngwaahịa ndị bụ isi corrosum fused, gwakọtara aluminium-magnesium spinel, gwakọtara duru corundum, gwakọtara otu kristal corundum, na calcined um-alumina.
Site na ntanetị ahịa na ntanetị na ntanetị, a na-ebupụ ngwaahịa YUFA karịrị mba 40 na mpaghara gụnyere United States, Germany, South Korea, Japan, Turkey, Pakistan, na India wdg.
30+ Afọ AH 30R.
Ndị ọkachamara n’ihe gbasara alumina gbara gị gburugburu, mmesi obi ike dị mma, nke ga-edozi nsogbu nke abrasives, ihe eji arụ ọrụ na akụkụ ndị ọzọ maka gị.
3 BAS PRR PR AKWESKWỌ
Nnukwu mmepụta, ngwaahịa nwere ike ịhazi dị ka mkpa ndị ahịa si dị. Site na ikike mmepụta kwa afọ nke tọn 250,000.
CB CR C CB CR C CB CR C USBUSR. ỌR.
Usoro 8, ihe karịrị ngwaahịa 300, na-akwado nhazi nke nkọwa na ụdị dị iche iche iji gboo mkpa gị.
Ọkachamara R&D TEAM
5 R&D emmepe, ekwenye mmekọrịta sayensị nnyocha nkeji, dị ka Shanghai Institute of Ceramics, Chinese Academy of Sciences, wdg Innovation na àgwà bụ anyị mgbe niile ihe mgbaru ọsọ.
17 igwe oku dijitalụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ, ọkụ ọkụ 2 na-ere ọkụ, ọkụ ọkụ ọkụ 1 na ọkụ ọkụ na-ebugharị 1, ụlọ elu prilling 2, 2 desulfurization na denitration.
100% mmepụta ngafe ọnụego, 100% factory ngafe ọnụego. Nditịm ịchịkwa ogo site na akụrụngwa rụchara ngwaahịa. Ọ bụghị naanị iji hụ na ogo ahụ, kamakwa iji hụ na ogo dị mma.
Utù YUFA nwere ekele dị ukwuu nye ndị ahịa ọhụrụ na ndị agadi maka ịbịakwute ụlọ ọrụ mmepụta ihe iji kwurịta okwu ma mụta. Ndị ahịa mara ngwaahịa sitere na YUFA ma nwee ụdị & mmụọ nke YUFA. YUFA Na-ewepụta ngwaahịa dị elu na ọrụ dị elu iji weghachite nkwado ndị ahịa. YUFA ga-abụrịrị onye ahịa kwesịrị ntụkwasị obi nye ndị ahịa.
Kwa afọ YUFA ga-ekere òkè na ngosipụta dị iche iche metụtara ụlọ ọrụ site na ụlọ na nke mba ọzọ, na-amụsi ọrụ ike na-amụ ma gbanwee ozi ngwaahịa dị iche iche, melite ogo na teknụzụ nke ngwaahịa anyị, na-atụkwa anya ịkwado ndị ahịa ndị ọzọ si n'akụkụ ụwa niile, ma nwee olile anya iji nye ndị ahịa ngwaahịa kacha mma na ezigbo ọrụ.